Ajọ Ifufe Gastón na-ewusi ike na Atlantic | Netwọk Mgbasa Ozi
Gaston, nke si n'oké ifufe nke ebe okpomọkụ gbaga na ajọ ifufe nke atọ na August 28, 2016, ma daba n'ụdị abụọ n'echi ya, na-ewusi ike ọzọ na Atlantic. N'ụzọ dị mma, ma ọ dịkarịa ala ruo ugbu a, ọ dịghị ike dị ka 28 nwere, mana ọ ka bụ ihe omimi nke ihu igwe na-eme ka ọtụtụ mmadụ nọrọ na njedebe. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ na-eru nso Azores.
Hurlọ Ajọ Ifufe Mba (CNH) nke United States, kọrọ na ọ dị 750 kilomita (1207km) n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Bermuda na 1445 kilomita (2325km) ọdịda anyanwụ nke Azores.
Can pụrụ ịhụ ebe A na-atụ anya na Ajọ Ifufe Gaston (a ga-agba ya gburugburu ojii) na Septemba 3.
Hurricane Gastón na-agagharị na 16km / h, na idebanye ifufe nke ihe ruru 185km / h edebanyelarịrị na gusts karịrị 220km / h. Ọ bụ oge kachasị ike nke oge ifufe Atlantic, yabụ enwere nchegbu dị ukwuu banyere ihe nwere ike ime. Mana… ànyị ga-echegbu onwe anyị n'ezie? Kedu ihe ụdị ndị ahụ kwuru?
Eziokwu bụ na enweghị ihe ga-echegbu onwe gị, ma ọ dịkarịa ala ugbu a. A na-atụ anya na ọ ga-eduga n'agwaetiti Britain, mana oke okpomọkụ nke ajọ ifufe ahụ ga-ezute ka ọ na-erute Europe dị ala karịa nke ahụ na Tropics, nke mere na agbakwunye na atụmanya ahụ Ifufe di elu emewo ka ike gwụ ya, yikarịrị, ọ bụrụ na o rute mba anyị, ọ ga-apụta n'ụdị oké ifufe n'ụsọ oké osimiri Galicia gaa na ngwụsị izu.
Oké ifufe nwere ike iru Spain?
Dabere na ọnụ ọgụgụ, ihe puru omume nke a na-eme bụ dị nnọọ ala. Ọzọkwa, n'afọ gara aga na Hurricane Joaquín enwere ọnọdụ yiri nke a, mana n'ikpeazụ ọ hapụrụ naanị mmiri ozuzo na Galicia. Iji chọta otu nke mere ala mmiri, anyị ga-alaghachi na 2005, mgbe Vince, onye nwetara ụdị 1.
Yabụ ugbu a, anyị nwere ike ịdị jụụ. Mana anyi aghaghi ichere hu ihe uzo Hurricane Gastón na eme. Anyị ga-aga n'ihu na-agwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ Ifufe Gastón na-ewusi ike na Atlantic, ọ ga-erute Spain?